5 प्रसिद्ध फिल्म ठाउँमा युरोप | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5प्रसिद्ध फिल्म ठाउँमा युरोप
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 10/07/2020)
युरोप प्रेरित कलाकार र filmmakers from around the world, त्यसैले यो फिल्म उस्तै निर्माता आकर्षित कुनै आश्चर्य छ! पत्ता5युरोप मा प्रसिद्ध फिल्म स्थानहरू र पुस्तक आफ्नो बिदाहरू र गतिविधिहरु युरोपेली संग सिद्ध छुट्टी लागि आफ्नो मनपर्ने चलचित्रहरू डुबाउनुहोस् गर्न सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू.
रेल यातायात यात्रा को वातावरण वातावरण मैत्री तरीका हो. यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र द्वारा गरिएको थियो एक ट्रेन विश्व मा सुरक्षित सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट.
1. प्रसिद्ध फिल्म ठाउँमा युरोप: Notting हिल, लन्डन, बेलायत
सम्झना ह्यूग फिल्म नीलो आँखा अनुदान Notting हिल? पत्ता Notting हिल, लन्डन भन्दा एक सुन्दर ठाउँहरू र सबै भन्दा घर quintessentially ब्रिटिश रोमी-com. यो फिलिम को कुनै पनि हेर्ने सहायता गर्न सक्दैन तर तपाईं एक सानो राम्रो महसुस बनाउन ... Notting हिल बारेमा सबै भन्दा राम्रो भाग केन्द्रिय लन्डन मा यो धेरै खिच्नुभयो थियो छ! यसको मतलब यो हो कि तपाईं भ्रमण गर्न धेरै प्रतिष्ठित स्थान देखाइएको चलचित्र!
यो शीर्षकमाथिको दृश्य, ह्यूग अनुदान वर्ण, विलियम ठेकर को Portobello रोड बजार मार्फत चलाउँछ. यो सबैभन्दा प्रतिष्ठित Notting हिल फिलिम स्थान मध्ये एक छ किनभने यो विश्व प्रसिद्ध बजार मात्र लायक एक यात्रा हो, तर बजार नै बस सुन्दर र विचित्र प्राचीन भरिएको छ किनभने बस पत्ता प्रतीक्षामा.
अर्को, हामी तपाईंलाई विल्स Bookshop गर्न भन्दा टाउको सिफारिस, 142 सुन्दर इटालियन सडक. यो सुन्दर सानो पुस्तक पसल स्वामित्व हुनेछ मा फिलिमहरु मा स्थित छ 142 सुन्दर इटालियन सडक. फिलिम को समय मा, यो थियो एउटा प्राचीन दोकान. आज, ठेगाना घर छ एक जूता दोकान. यो नजिकैको नाम द्वारा bookshop बताए छ यो यात्रा Bookshop मा आधारित 13-15 Blenheim बन्द गर्ने फिलिमहरु स्टोर लागि प्रेरणा थियो.
2. Harry Potter, Alnwick महल, बेलायत
यो प्रतिष्ठित 1,000 वर्ष पुरानो मध्ययुगीन महल फिल्म उद्योग को मनपर्ने छ, जुन हामीले बन्द यसलाई छोड्न सक्छ किन छैन हाम्रो5युरोप सूचीमा प्रसिद्ध फिल्म स्थानहरू. यो Harry Potter मा Hogwarts लागि स्थान रूपमा भन्दा प्रसिद्ध छ. Alnwick महल मात्र छ को एक ठूलो महल inhabited मा इङ्गल्याण्ड र 1,000 वर्ष पूरानो, तर यो पनि यसको आफ्नै सही मा एक चलचित्र तारा को कुरा हो!
यो सुरम्य महल भन्दा ब्रिटेन प्रतिष्ठित मध्ये एक छ, having made स्वरूप लोकप्रिय फिलिम र टीवी शो जस्तै एलिजाबेथ, रोबिन हुड: राजकुमार को चोर, को Downton Abbey क्रिसमस विशेष, र, यसको सबैभन्दा प्रसिद्ध रूपमा भूमिका Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, पहिलो दुई मा Harry Potter चलचित्रमा.
यो मा महल कि मैदान Harry थियो आफ्नो पहिलो Quidditch पाठ (महल अब होस्टहरूको broomstick प्रशिक्षण को गर्मी महिना भर) र स्थान कहाँ फोर्ड एंग्लिया दुर्घटना उडान गर्ने Weasleys मा स्कूल को पहिलो दिन उतरा.
अलग देखि यसको forays मा ठूलो र सानो पर्दाका, को भव्य महल पनि लामो छ र धनी इतिहास. It was erected around 1096 र मा स्थित नेपाली काउंटी को Northumberland. आज यो नर्थम्बरल्याण्ड को ड्यूक र आफ्नो परिवारलाई घर छ र विंडसर महल पछि दोस्रो ठूलो Inhabited बेलायतमा महल छ.
3. प्रसिद्ध फिल्म ठाउँमा युरोप: Hamlet, Dunnottar महल, स्कटल्याण्ड
जहाँसम्म महल जाने, यो Dunnottar भन्दा बढि रिमोट र नाटकीय स्थान कल्पना गर्न गाह्रो छ. सायद सबैभन्दा घना स्थिति को सबै स्कटिश महल, यो एक बस््छ को शीर्ष मा यसको आफ्नै cliff प्रायद्वीप गर्न सडक मा Aberdeen, बचाव सबै पक्षलाई द्वारा, को सेना को प्रकृति. यो डिज्नी Pixars बहादुर मा राजकुमारी Meridas परिवार घर प्रेरक लागि प्रसिद्ध पनि पाठ्यक्रम छ र Franco Zeffirellis Hamlet मा Elsinore लागि दुगुना!
यसको स्थान रूपमा रैंकों सबैभन्दा नाटकीय र कहीं तपाईं मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आँखा भोजमा केही मा सबैभन्दा हडताली coastlines मा स्कटल्याण्ड. हावा grassland बह, ठाडो भीर plunging, र thrashing छालहरू सबै सँगै एक धेरै रोमान्टिक पृष्ठभूमि मा आउन.
Dunnottar पनि महल प्रतिरक्षाको मा एक अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ र दन्त्यकथा र रहस्यहरुलाई को राम्रो खुराक छ. Whigs ब्याड़कमा बहुमूल्य वस्तु बनाउन हुनेछ आफ्नो कपाल मा खडा रूपमा अन्त हुनेछ चर्च (अहिले भग्नावशेष) torched by विलियम वालेस.
तापनि Dunnottar छ लोकप्रियता वृद्धि, यो busier स्कटिश महल को एक छैन. प्लस, यसको आकार तपाईं मतलब सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन् टाढा को भीड र आनन्द आफ्नो अद्वितीय स्थान लगभग आफ्नो मा. यो पनि एंगस तटीय मार्गमा सिद्ध स्टप बन्द छ, साँच्चै प्राकृतिक स्कटिश सडक यात्रा.
4. स्थापना, पेरिस, फ्रान्स
जब तपाईं पेरिस विचार, फ्रान्स, तपाईं स्वतः विचार को एइफिल टावर. र किन छैन हुनेछ? यो सुन्दर छ, र यो भव्य छ, तर हामी सबै यो सबै पोस्टकार्ड मा एक हजार पटक देखेको छु, पोस्टर, व्यापार र समाचार फोटो भएकोले हामी बच्चाहरु थिए. तर त्यहाँ सिर्फ एक पत्थर एफिल देखि फेंक कुरा साँच्चै खडा शांत छ: यो स्थापना पुल.
बिंदु डे बीर Hakeim एक पुल पार को Seine नदी पेरिस. एक सय वर्ष पहिले निर्माण र वफादार भई स्थानीय एक नदी पार बिन्दु रूपमा सेवा गर्दैछन्, तर 2010 यो भए एक साँचो फिल्म स्टार. जब कि छ क्रिस्टोफर नोलन आइपुग्दा आफ्नो दल, लगायत लियोनार्डो DiCaprio, Ellen Page, र यूसुफ गर्डन Levitt.
मा 2010 केहि जादुई भयो, मा यो पुल. यो शीर्षकमाथिको दृश्य, एलेन पन्ने Ariadne वर्ण सपना कसरी निर्माण गर्न बुझ्छ.
5. प्रसिद्ध फिल्म ठाउँमा युरोप: La Vitaebella, Arezzo, इटाली
यो चलचित्र अझै पनि दिन्छ एक टियर मेरो आँखा जब म पनि यो सोच्न. म देख्यो यो प्रसिद्ध फिल्म स्कूलमा धेरै वर्ष पहिले, र यो कहिल्यै छोडेनन् छ मेरो स्मृति. म व्यक्तिगत यो प्रसिद्ध फिलिम स्थान आफैलाई हेर्न गएका छन् किन यो छ! roberto Benigni 1997 ओस्कार विजेता ला Vita ई बेला (जीवन सुन्दर छ) छ, एक उत्कृष्ट नमूना! मा सेट WWII, यो कथा बताउँछ, एक यहूदी इटालियन नाउँ मानिस Guido Orefice. He meets and falls in love with the beautiful दिदीले र तिनीहरूले एक छोरा छन्, Giosue, सँगै.
कथा Guidos परिवारको बारेमा छ र आफ्नो जीवन तलमाथि गरिएका प्राप्त कसरी तिनीहरूले यातना शिविरमा लगियो गर्दा. जबकि त्यहाँ, क्रम मा आश्रय आफ्नो छोरा देखि horrors को आफ्नो परिवेश, Guido weaves एक विस्तृत कथा. आफ्नो समय मा शिविरमा केवल एक खेल. धेरै सेट मार्फत फिल्म को शुरुवात को centerpiece खिच्नुभयो, तथापि, राम्रो Tuscan शहर को Arezzo.
बोलोग्ना to अरेज्जो टिकटहरू
तपाईँ या त हेर्न यी चलचित्रहरू मध्ये एक डाउनलोड गर्न तयार रही वा फलस्वरूप पहिले नै आफ्नो यात्रा योजना, तपाईं हो? किन छैन दुवै! जानुहोस् एक ट्रेन सेव र एक मिनेट मा एउटा टिकट बुक5युरोप मा प्रसिद्ध फिल्म स्थानहरू!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 प्रसिद्ध फिल्म ठाउँमा युरोप” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-film-spots-europe%2F – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel filmplaces चलचित्रमा चलचित्र स्पटहरू trainjourney Tranride